Tantara: Mampanantena fa Hanome Paradisa Andriamanitra - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
‘Tsy hitranga mihitsy izany’, hoy ny ho ﬁtenin’ny maro. ‘Nisy foana ny fahasahiranana teto an-tany, ary hisy hatrany izany.’ Nefa saintsaino izao: Karazam-ponenana manao ahoana no nomen’Andriamanitra ho an’i Adama sy Eva?
Ao amin’ilay paradisa vaovao ho avy, dia tsy hisy na inona na inona hanimba na handringana. Hisy ny ﬁadanana tanteraka. Ho salama sy sambatra ny olona rehetra. Izany dia ho sahala amin’ny nanirian’Andriamanitra azy tany am-boalohany. Nefa hianarantsika any aoriana ny fomba hitondran’Andriamanitra izany.
Iza no mendri-koderaina noho ny ﬁovan’ny toetran’ny olona ankehitriny sy ao amin’ny tontolo vaovao? (Isaia 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)